‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध विकास र समृद्धिको यात्रामा’
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धले दुवै देशको विकास र समृद्धि ल्याउने मार्गको रुपमा लिन आवश्यक रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य र सम्भावना’ विषयक अन्र्तक्रियामा नेपाल र भारतको सम्बन्धले दुवै देशको विकासमा टेवा पुगेको बताए ।
नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सम्झौता खारेज गरी नयाँ बाटोको खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुरानो सम्झौताले दुवे देशलाई फाइदा नपुगेको हुनाले नयाँ बाटोको खोजी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । पुरना सम्झौताहरु कार्यान्वयनको बिषयमा सहज नभएको समेत जनाए । पञ्चेश्वर परियोजना, कर्णाली जलविद्युत आयोजनालगायतका सम्झौतातर्फ संकेत गर्दै उनले कार्यान्वयन या खारेजीको विकल्प रोजेर बढ्नु आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल र भारतबीच विन विनको अवस्था बनाएर विकास र समृद्धिको यात्रामा साझेदारी गनुृपर्ने नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरी बताए । दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धी सम्झौताले सार्थक परिणाम हासिल गर्नुले सबैलाई उत्साही बनाएको उल्लेख गरे । दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भई सफल परिणाम हासिल हुँदा सम्बन्ध मजबुत भएको लाबी गरे ।
भारतको नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको भन्दै सम्बन्धबाट आर्थिक लाभ लिनसक्ने अवस्था बनेको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै त्यो नेपालका लागि लाभदायक हुने भनाई राखे । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक भएको भन्दै दुवै देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एक अर्काबाट सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गरे । वीपी कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी, मनमोहन अधिकारीलगायतले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको चर्चा गर्दै जयप्रकाशनारायण र राममनोहर लोहियालगायतले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान रहेको बताए । जयप्रकाशनारायण र राममनोहर लोहियालाई नेपालमा गिरफ्तार गरिंदा नेपाली जनताले जेल तोडेर भगाएको इतिहास प्रष्टाए ।
नेपाल र भारतबीच अबको सम्बन्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा एकमत भएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले जनाए । भारतीय लगानी बढीभन्दा बढी भित्रिएर रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतको हाराहारीमा भएको अवस्थामा नेपालले भोगिरहेको व्यापार घाटा गम्भीर चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
दुवै देशबीच आर्थिक अन्र्तसम्बन्ध मजबुत बनाउँदै राजनीतिक विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले जोड दिए । भारतीय सहभागितामा उत्पादनको साझेदारी हुनसके व्यापार घाटाको समस्या समाधान हुने औल्याए ।
नेपालप्रति चासो र मायाभाव दर्शाउने नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनु नेपालका लागि प्रगतिको उत्तम अवसर भएको बताए । अवसरलाई खेर फाल्न नहुनेमा उनको जोड थियो । भारतको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि अवसर बनेको लोहनीले बताए । नेपालले भारतबाट लाभ लिनसक्ने जलविद्युत, कृषि, प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरु रहेको बताए । जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा भारतीय पक्ष अझ चासोका साथ आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले भारतको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनसक्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले उल्लेख गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा नेपालले अभूतपूर्व प्रगति गर्न सक्ने अवसर बनेको जनाए ।
२०७६ श्रावण २९ बुधबार १७:२०:०० मा प्रकाशित